TUKARAQ: Dagaal Wakaaladeed (proxy war) | Hadalsame Media
Home Maqaallada TUKARAQ: Dagaal Wakaaladeed (proxy war)
TUKARAQ: Dagaal Wakaaladeed (proxy war)
(Tukaraq) 29 Maajo 2018 – Dhallinyaro, casharka maanta waxaan u baajiyay in aan idinla wadaago wejiga dhabta ah ee uu leeyahay dagaalka ka socda degaanka Tuka-raq. Markaan meel iska-dhigno mixnadaha nagu dabran oo ay u wayn-tahay caadifada indhaha-la´ ee naga xagaalisay hooshaarkii ummadnimo waxaanu arkaynaa dagaalkan in uu yahay mid lamid ah dagaal-kasta ee dad sokeeye ah dhex-mara ee dunida ka dhaca. Waa dagaal wakaaladeed (Proxy War) oo legdankiisu uu ka dhexeeyo shirkado shidaal, laakiin shakhmadka la dhaqaajinayo uu yahay siyaasi Soomaali ah iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo ka amar-qaadanaya.
Shirkadahaas oo ay leeyihiin dowlado shisheeye ayaa hadda ka-hor waxay midna heshiis la gashay maamulka Puntland midna maamulka Somaliland. Mid kamid ah wargaysyada ka soo baxa dalka Sweden oo la yiraahdo Aftonbladet, sebtidii la soo dhaafay oo ay taariikhdu ahayd 28/ 5- 2018-kii wuxuu daboolka ka qaaday arinkaas. Wargeyska oo soo qoray maqaal uu arintan ku caddeynayo, wuxuu cinwaan uga dhigay Dagaalka ka dhexeeya Norway iyo Sweden ee shidaalka Soomaaliya (Norska – Svenska Krig om Olja i Somalia)
Waxaa hubaal ah, haddii siyaasiyiinta laga helo dhiiranaan ay kaga tagaan caadifadda beenta ku dhisan oo ay dad-waynaha ku maaweelinayaan, dabadeed ay u gudbaan in ay xaqiiqada nolosha la fal-galaan. Waxaa suuragal noqon lahayd, hantida ceegaagta ceelkaas iyo hantida kale oo badan ee uu dalku leeyahay, in uu qof walba oo Soomaali ah ka hodmi lahaa. Laakiin waxaa dhibaatadu ka taagan tahay siyaasi ayan u muuqan dhiigga dhallinyarada ee hudurka ku qubanaya, iyo natiijada ka danbeysa ee ah waalidiin gablama, xaasas asay qaada iyo caruur agoomooba.
Siyaasi la maslaxada ah shirkadahaas doonaya in ay ka taajiraan hantida degaanka oo aanan kala jecleyn guryaha ku baaba´aya. Siyaasiga caynkaas ah markii uu helo shacab indha-la´ oo u jidbeysan codkiisa uu ku jilayo geesinimo uu ku difaacayo danaha beesha. Markaas dad-waynaha iyaga ayaa go´aanka leh ay qarniga 21-aad caruurtooda ama ku gobeynayaan ama ku gumeynayaan.
Qore: Dr. Sadiq Enow
Previous articleWAR CUSUB: Ciidamada dowladda oo gacanta ku dhigay kooxo bastooladleey ah
Next articleMa lagu tilmaami karaa laacibka ugu daacadsan kubadda cagta casrigan? + Sawirro